विना भट्टराई | मंसिर ४, २०७६ बुधबार | 0
कास्की । मंसीर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा साझा पार्टीबाट रजनी केसी चुनावी मैदानमा होमिनु भएको छ । केसी लामो समयदेखि समाज रूपान्तरणका लागि सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिकरूपमा सक्रिय अभियानकर्ता हुनुहुन्छ । केसीले सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासंघ, नेपाल परिवार नियोजन संघ लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुमा नेतृत्वदायी जिम्मेवारी सम्हाल्नुका साथै लामो समय विभिन्न क्षेत्रमा रहेर अनुभव बटुलिसक्नुभएको छ ।
गत बैशाखमा पोखरा विश्वविद्यालयको उपप्रशासक पदबाट राजीनामा दिएर उहाँ साझा पार्टी निर्माणको अभियानमा संलग्न हुनुभएको थियो । यसअघि नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय रहनुभएकी केसी उक्त पार्टी परित्याग गरेर साझा पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । जनसंख्या, लैङ्गिक अध्ययन तथा विकासमा स्नातकोत्तर गर्नुभएकी केसीले साझा पार्टीलाई जनताले वैकल्पिकरुपमा हेरेको बताउँदै कास्कीमा आफूले नै चुनाव जित्ने दाबी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, रजनी केसीसँग दैनिक अनलाइन डटकमका लागि विना भट्टराईले गरेको कुराकानीः
उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कस्ता कस्ता कार्यक्रम गर्दै आउनुभएको छ ?
तिहारको समयमा तिहारकै, देउसी भैलो कार्यक्रम गरेर शुभकामना आदानप्रदान गर्दै चुनावी प्रचार गरियो । तिहारपछि चाहिँ घरदैलो, कोणसभा गर्दै चुनावी प्रचारप्रसारलाई तीब्रता दिइएको छ । साथसाथै पछिल्लो चरणमा सामाजिक सञ्जाल पनि चुनावी प्रचारप्रसारका लागि निकै राम्रो माध्यम बनेको छ ।
प्रविधिको विकासले चुनावी प्रचारप्रसारमा कस्तो सहयोग पु¥याएको छ ?
साझा पार्टीको चुनाव प्रचारप्रसारको पहिलो माध्यम नै सामाजिक सञ्जाल देखिएको छ । सबैको प्रतिक्रिया पनि त्यहीँ आएको छ । यसले सहज त गराएको छ नि । तर, त्यो मात्रै पनि सारथि हैन । हामी चाहिँ कास्की क्षेत्र नम्बर २ का मतदाताको घरदैलोमा जाने, भेटघाट गर्ने, उहाँहरुको कुराहरु सुन्ने, विचारहरु आदानप्रदान गर्ने पनि गर्दै आएका छौँ । कोणसभा गरेर साझा पार्टीका एजेण्डा के के हुन् ? मूल्यमान्यता र सिद्धान्त के के छन् ? यो उम्मेदवारी केका लागि भन्ने विषयमा हामीले मतदातालाई बुझाउँदै आएका छौँ ।
साझा पार्टीलाई कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा जनताको साथ र सहयोग कति छ ?
मतदाताहरुले निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँहरुलाई पनि संविधान जारी गरेको ३० औँ वर्षसम्म पनि, प्रजातन्त्र ल्याएको ३० औँ वर्ष हुँदा पनि यो देशमा परिवर्तन आएन । जीवनस्तरमा परिवर्तन आएन । भ्रष्टाचार, कुशासन, विकृति विसंगतिले उहाँहरुलाई आक्रान्त बनाइराखेको छ । त्यसरी उकुसमुकुस भइराखेको अवस्थामा साझा पार्टी उहाँहरुका लागि विश्वासको पार्टी बन्नेमा उहाँहरु सकारात्मक र आशावादी देखिनुभएको छ । त्यसैले उहाँहरुले तराजुमा भोट हालेर पठाउँछौँ भनेर वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा साझा पार्टीलाई पाएको मैले अनुभूति गरेकी छु ।
महिलाको व्यक्तिगत क्षमताभन्दा बढी उसको पहिरनमा बढी चासो देखाएको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । त्यो समस्या तपाईलाई कति आयो ?
त्यति साह्रै चाहिँ छैन । तर, कसैकसैले चाहिँ महिला उम्मेदवार हुँदैगर्दा उसले यो लगाएको, त्यो लगाएको, यस्तो लगाएको भन्ने कुराहरु गर्नुहुन्छ । वास्तवमा मान्छेले विचार बुझ्ने हो । कति समस्या छ भन्ने कुरा गर्नुपर्नेमा अनावश्यक कुराहरुतिर जानु तुच्छ कमेन्ट मलाई राम्रो लाग्दैन । किनभने महिला नै भनेर महिलाले त्यो प्रकारको कमेन्ट गर्नु भनेको राम्रो हैन । यो समस्या मेरो मात्र हैन कि अधिकांश महिलामाथि हुने गर्दछ । राष्ट्रपतिकै पनि हेर्नुहोस् न ? उहाँकै पोशाकका बारेमा धेरै कमेन्टहरु आइरहेका हुन्छन् । तर एउटा पुरुषले के लगायो, के लगाएन भन्ने कुरा त कहिल्यै पनि कमेन्टमा आएको हुँदैन । जे लगाए पनि हुन्छ । सट लगाए पनि ठिक छ, दौरासुरुवाल लगाए पनि ठिक छ । के लगायो भन्ने कुरालाई कसैले महत्व दिँदैन र ध्यान दिँदैन । तर महिलाको चाहिँ जे मा पनि कमेन्टहरु दिनु जरुरी हैन । त्यतातिर चाहिँ हामी जानै हुँदैन । यो २१ औँ शताब्दि हो । यसमा उसको योग्यता, क्षमताका बारेमा चर्चा हुन आवश्यक छ ।
लामो समयसम्म कांग्रेसमा सक्रिय रहेर उम्मेदवारी दिने समयमा साझा पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो । काँग्रेसबाट टिकट नपाउने सम्भावना भएका कारण यसो गर्नुभएको हो ?
मैले अघि पनि भने । पछिल्लो समयमा साझा पार्टी जनताको वैकल्पिक मार्ग बनेको छ । विकल्पका रुपमा आएको छ । त्यसैले म यो पार्टीमा आएकी हुँ । यो पार्टीको एजेण्डा, नीतिनियम, सिद्धान्त मन परेर मैले यसलाई अङ्गालेकी छु । मैले जुन निर्णय गरे त्यो निकै राम्रो गरेकी छु । पुरानो पार्टी कांग्रेसको पुरानो सिद्धान्तले नयाँ पुस्तालाई नसमेटेको हुँदा मैले पार्टी परित्याग गर्नुप-यो।
अघिल्लो निर्वाचनमा उक्त क्षेत्रमा तेस्रो पार्टी बनेको साझाले यो निर्वाचनमा चुनाव जित्ने सम्भावना कति छन् ?
एकदमै छ । हामीलाई यहाँका जनता, मतदाताहरुको निकै ठूलो साथ र सहयोग छ । म सामाजिक सहयोग गर्ने व्यक्ति भएका कारण पनि उहाँहरु झनै व्यक्तिगतरुपमा पनि मप्रति विश्वस्त हुनुहुन्छ । साझा पार्टीलाई भोट दिन्छौँ भन्नुभएको छ । म पूर्ण रुपमा विश्वस्त छु कि उहाँहरुले मलाई निराश हुन दिनुहुन्न । उहाँहरुले एउटा अवसर मलाई प्रदान गर्नुहुनेछ ।
साझा पार्टीका चुनावी एजेण्डा के के छन् ?
हाम्रो चुनावी एजेण्डा भनेको कुशासन, भ्रष्टाचार, विसंगति, विकृतिपूर्ण राजनीतिलाई पार लगाएर सुसंस्कृत राजनीति थालनी गर्नु नै हो । इमान्दारिता र निष्ठामा ह्रास आएकै कारण आज मुलुक यो अवस्थामा आइपुगेको छ । यसलाई सुधार गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अनुभूति दिलाउनु नै मुख्य एजेण्डा छ ।
त्यस्तै पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारी र उत्कृष्टताको चार खम्बामा टेकेर ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’मार्फत एकै पुस्तामा देशमा रूपान्तरण ल्याउने चुनावी एजेण्डा पनि हामीले बोकेका छौँ ।